Xassan Sheikh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta oo ka wada hadlaya Maamulka Jubbaland – idalenews.com
Madaxweynaha Somalia, Xassan Sheikh Maxamuud iyo Wafdi uu hoggaaminaayo ayaa lagu wadaa inay saakayto u ambabaxaan Magaaladda Mambasa ee Dalka Kenya.
Madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu dhigiisa dalka Kenya, Uhuru Jommo Kenyatta la kulmo, si ay uga wada hadlaan Xiriirka labada dal, Arrimaha Ammaanka, Qaxootiga iyo sidii Dowladda Kenya loogu qancin lahaa inay faraha kala baxdo maamul u sameynta Gobaladda Jubbooyinka.
Labada Madaxweyne waxay kaloo kawada hadlayaan Mustaqbalka Ciiddamadda Kenya ee Hawlgalka Nabad ilaalinta u jooga Gobaladda Jubbooyinka, iyadoo Dowladda Somalia ay saluugsan tahay waxqabadka iyo Dhex dhexaadinta Ciiddamadaasi.
Wafdiga Madaxweynaha Somalia sii raacaya ayaa waxaa ka mid ah Wasiirka Arrimaha Dibadda Fozia Yusuf Haji Ahmed iyo Saraakiil kale.
Dhinaca kale, Madaxweynaha Kenya, ayaa sheegay in ujeedada Ciiddamadiisa u joogan Somalia inay tahay sidii Nabad iyo degnaansho loogu soo dabaali lahaa Somalia, wuxuuna xusay inay Ciiddamadiisa ka hoos shaqeynayaan Hawlgalka Nabad ilaalinta AMISOM.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa hadalkaasi ka sheegay mar uu shalay la kulmay Haweeneyda madaxda ka ah Ururka Midowga Africa (AU) Drs. Nkosazana Dlamini-Zuma.
Si kastaba ha ahaatee, kulanka Madaxweynayaasha Somalia iyo Kenya oo ah kulankii labaad ayaa waxa uu saameyn ku yeelan doona Maamul u sameynta Gobalada Jubbooyinka iyo Gedo, iyadoo Dowladda ay horay gaashanka ugu dhufatay Shir weynaha lagu doonayay in maamul loogu sameeyo Gobaladaasi.
Barre Hiiraale oo sheegay inay suura gal tahay, dagaalo sokeeye oo markale ka dhaca Jubbooyinka